IYakamoz Apart 1 (!) - I-Airbnb
IYakamoz Apart 1 (!)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMehmet Emin
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMehmet Emin iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifumaneka kumbindi weKalkan, indawo yethu yokuhlala ikumgama wokuhamba elunxwemeni. Izibonelelo ezinjengeekhefi, iivenkile zokutyela kunye neebhari zikufutshane kakhulu kwindawo yethu yokuhlala abantu aba-2.
Indawo yethu esembindini iya kukubonelela ngokulula. Indawo yethu ikumgama wokuhamba elunxwemeni kwaye kukho iikhefi, iindawo zokutyela kunye nemivalo kufutshane. Ngexesha elifanayo, unokutyelela ngokulula iindawo ezifana neKaputaş beach, Patara Beach, Saklıkent Canyon, Kekova, njl. ngendlela yohambo lwemini.
4.63 · Izimvo eziyi-16